Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo ka Cabanaya xubno ka tirsan Xukuumadda iyo Saraakiisha Amniga - Awdinle Online
Gudoomiyaha Gobalka Banaadir oo ka Cabanaya xubno ka tirsan Xukuumadda iyo Saraakiisha Amniga
October 30,2019 (AO) – Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay ka jirto dhibaatooyin badan oo aan la mahdin, kuwaas oo u baahan in wax weyn laga qabto.
Cumar Filish oo aan hadalkaani ka dhihin meel fagaaro ah ayaa dhowr qof oo uu siyaabo kala duwan ula kulantay oo ay ku jiraan odoyaal u qiray in uu wajahayo culeysyo aad u waa weyn.
Caqabadaha ugu waa weyn waxa uu sheegay in uu kala kulmayo xubno ka tirsan Golaha Wasiiradda iyo Hay’adaha ammaanka, dhibaatooyinkaas ayuu sheegay in ay ku rideen niyad jab iyo rajo xumo sida ay noo xaqiijiyeen dadkii la kulmay Cumar Filish.
Cumar filish ayaa yiri “Dhibka ay shacabku ku qabaan Wasiiradda Xukuumadda, NISA iyo Booliiska ana ku qabaa waliba isku mid ayaa ka nahay” ayuu ku yiri qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada muqdisho oo la kulmay duqa muqdisho.
“Waxaan isku dayay inaa kow wax ka qabto dhibaatada shacabka lagu haayo si aan u abuuro xiriirka shacabka iyo ciidamada lagana wadashaqeeyo amaanka laakiin waa laga hor yimid waliba dagaal ayaa laygula galay dad sar sare ayaana ku jira kuwa igula dagaalay” ayuu yiri Cumar Maxamuud Maxamed Filish.
Cumar Filish ayaa odayaasha u sheegay in dhibka uusan ku qaban oo kaliya saraakiisha ciidamada booliiska balse uu wajahayo dagaal kale oo culus kaas oo saameeyn ku leh shaqadiisa iyo masuuliyadii loo idmaday.
“Kaliya saraakiisha amniga ma ahan dhibka aan qabno hadii aa nahay gobalka ee waxaa dhib intaas ka weyn aan kala kulmeynaa masuuliyiin ka tirsan xukuumadda, waana ka dhaqaaqi la’nahay” ayuu yiri Cumar Filish oo la hadlay qaar kamid ah odayaasha Muqdisho.
Hadalka Cumar Filish ayaa imanaya ayada oo uu sii xumaanayo xiriirka kala dhaxeeya booliska, waxaana dhowaan ay isku dhaceen taliye ku-xigeenka koowaad ee booliiska Cusmaan Kaniif.
Previous articleMeeting between Ministers of Defence of the Russian Federation and Somalia
Next articleDowladda Turkiga oo noqtay Dalkii ugu horeeyey ee ka soo Jawaaba Fatahaadaha Beledweyne